davidtun88 🇲🇲 – #myanmar,#burma,#rangoon
Buddhist Terrorist ဝီရသူ
Coronavirus outbreak in Wuhan,China
Happy Birthday 🎂🎂🎂 Aung San Suu Kyi – 19/6/2019
Happy Birthday ( 19/6/2019 ) Aung San Suu Kyi
Here clear evidence Myanmar Army keep lying and targeting, destroying sncient pagodas.
ICJ – အမူတရားရုံးတက်ရောက်လာခဲသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
July 24 နေ့တွင်လွှတ်တင်တော့မည့် မြန်မာကိုယ်ပိုင် ဂျိုတု
There must be more than life to this. (QUEEN )
Where is my son? Please!
ဝီရသူ ဝေဖန်မူအများဆုံးခံရသော ဟောကြားမူများ
Post author By ဖိုးကျော်ရင်ထဲငြိမ်း
No Comments on Military Coup in Myanmar.
လူသတ်ကာင်မိသားစု He shooted with gun student.
Tweet from 25 News KXXV (@25NewsKXXV)
No Comments on Tweet from 25 News KXXV (@25NewsKXXV)
25 News KXXV (@25NewsKXXV) Tweeted:
PSA from the World Health Organization! Do The Five 🖐️ https://t.co/zrQFyaLcQo (https://twitter.com/25NewsKXXV/status/1239612650239254528?s=20)
Why Myanmar’s army is wrong to reject limits power.
No Comments on Why Myanmar’s army is wrong to reject limits power.
No Comments on ဖုတ်သက်
ဒီရက်တွေဟာ မြန်မာစစ်တပ်အဖို့ သိက္ခာမဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပ ဒေ ပြင်ဆင်ဖို့ လွှတ်တော်မှာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြရာမှာ လွှတ်တော်ထဲကို ဟောင် ကောင်တွေ ရောက်နေတာကို ပြည်သူလူထုက သိမြင်သွားကြပြီ။ ခြေဥပြင်ဆင်ဖို့ အဆို တင်သွင်းတဲ့ အမတ်တွေ တည်ငြိမ်သလောက် အော်တိုစစ်သားအမတ်တွေက သိက္ခာတစ် ပြားမှ မရှိဘဲ ဝုန်းဒိုင်းကြဲအော်ဟစ်နေကြတာကို အများပြည်သူမြင်တွေ့နေရပြီ။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတောင် အစည်းအဝေးခန်းမထဲမှာ တဟေးဟေးနဲ့ စာမောင်းသလို ခွေး မောင်းသလိုလုပ်နေရပြီ။
ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊အချုပ်အခြာအာဏာတည်တန့်ခိုင်မြဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေးဆိုတဲ့ အာလူးတာဝန်အရေးသုံးပါးမြောင်းထဲရောက်သွားတဲ့အပြင် တပ်မတော်သာအမိတပ်မတော်သာအဖဆိုတဲ့ ရွှီးလုံးလည်း သဲထဲသေးပေါက်သလို အရာ မထင်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူသာအမိ ပြည်သူသာအဖ ဆိုတာဟာ အင်မတန်ထင်ရှားလာတယ်။ “ခြေဥကိုပြင်ရမှာပေါ့။ တပ်မတော်ဟာ နိုင်ငံရေးမလုပ်ပါဘူး။ အချိန်တန်ရင်ထွက်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ၉၂%ရာခိုင်နှုန်းက ထောက်ခံထားတာလေ။ ခြေဥကိုပြင်မယ်ဆိုတော့ လူထုက အရမ်းအရမ်းအံ့သြသွားကြတယ်”ဆိုတဲ့ ဖာစကားတွေလည်း ခြင်းကြားရေယိုဖြစ်ကုန်ပြီ။
ဒါတင်မက အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ လူမျိုးဘာသာခွဲခြားမှုရှိကြောင်း၊ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် ဥပဒေရေးဆွဲပြီး ၅၉(စ)ကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြောင်းဆိုတဲ့ လိမ်ညာဖြီးဖြန်းတာတွေလည်း ဗူးပေါ်သလိုပေါ်ခဲ့ပြီ။ နိုင်ငံတကာ အရေးကျွမ်းကျင်လှပါချည့်ရဲ့ ဆိုတဲ့ ဝဏ္ဏမောင်လွင်လိုလူမျိုးကတောင် တပ်မတော်ကို အကြပ်ရိုက်အောင် မလုပ်ပါနဲ့ ဆိုတဲ့ အသံထွက်လာတဲ့အထိ ရိုက်ခတ်မှုပြင်းထန်ခဲ့ပြီ။
ဒီမှာတင် “ခြေဥပြင်လိုက်ရင် တိုင်းပြည်စစ်တလင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့။ တိုင်းတပါးကျွန်ဘဝ ရောက်သွားမှာပေါ့ဆိုတဲ့ ဖာခေါင်းလှန့်လုံးတွေလည်း လေနှင်ရာလွှင့်သွားခဲ့ပြီ။ လွှတ် တော်မှာ အခုတင်သွင်းနေတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအဆိုဟာ အောင် မြင် သည်ဖြစ်စေ မအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ တိုင်းပြည်ကို ဘယ်သူတွေ ဒုက္ခပေးနေတယ်။ တိုင်းပြည်အကြပ်အတည်းဆိုက်အောင် ဘယ်သူတွေ ကြိုးကိုင်ဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာ လူ ထုက ကောင်းကောင်းကြီးသိသွားကြပြီ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အန်အယ်လ်ဒီအစိုးရဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လေးနှစ်ကျော်ကာ လတလျှောက်လုံး နွားတွေ အချိန်မီအမြင်မှန်ရပါစေတော့ဆိုပြီး ရင်ကြားစေ့ရေးမူကို ပြည်သူငြိုငြင်နေတဲ့ကြားက တစိုက်မတ်မတ်စွဲကိုင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာအသွင်ကူးပြောင်းရေး အတွက် အားထုတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ နွားတွေရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့မှုကြောင့် အင်မတန် နူးညံ့သိမ့်မွေ့လှတဲ့ ရင်ကြားစေ့ရေးမူဟာ အဟောသိကံဖြစ်ခဲ့ရ တယ်။
အခုအဲဒီနည်းနဲ့မရတဲ့အဆုံး နောက်ဆုံးအချိန်မှာ လွှတ်တော်တွင်းထိုးစစ်ကို သူသေကိုယ် သေဆင်နွဲလိုက်ပြီ။ဒါကြောင့် လူ့တိရစ္ဆန်တွေ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကို သဘောတူတယ် ဆိုရင်လည်း ဒင်းတို့မြောင်းထဲရောက်ပြီ။ သဘောမတူပါဘူးဆိုရင်လည်း ဘယ်ပြည်သူကမှ မဲတစ်ပြားပေးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ရှေ့တိုးတံပိုး နောက်ဆုတ်လှည်းတုတ်ဆိုတဲ့ အခြေ ဆိုက်ကုန်ကြပြီ။
ဒီတော့ ဒီမအေယိုးများ ရွေးစရာနောက်ဆုံးလမ်းဆိုလို့ အာဏာသိမ်းတဲ့တစ်နည်းပဲရှိတော့ တယ်။ အာဏာသိမ်းရင်လည်း လူထုအုံကြွမှု တပ်တွင်ပုန်ကန်မှုတွေအပြင် အိုင်စီဂျေအဆုံး အဖြတ်နဲ့ ကြိုးစင်တက်ရဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်။ ကျုပ်တစ်ဦးတည်းအမြင်အရကတော့ နောက်ဆုံးပိတ်အဖြေတစ်ခု ပြတ်ပြတ်သားသား ပေါ်ထွက်လာအောင် အာဏာသိမ်းလိုက်စေချင်တယ်။စစ်ကျွန်ဘဝဆိုတာ သေမထူးနေမထူးပဲ။
နိဂုံးချုပ်ရရင် ဒီကောင်တွေမှာ သွေးရိုးသားရိုးလူ့အသက်မရှိတော့ဘူး။ သွေးရူးသွေးတန်း ဖြစ်နေတဲ့ ဖုတ်သက်ပဲရှိတော့တယ်။ ဖုတ်သက်ဆိုတာ တကယ်လူမဟုတ်တော့ဘူး။ စားဖို့ ပဲသိတော့တယ်။ ပုံမှန်အသက်ရှင်နေတာ မဟုတ်တော့ဘူး။
ဒီတော့စစ်တပ်ရဲ့ ဖုတ်သက်ကို အမြန်ဆုံးထွက်အောင်ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ အားလုံးမှာတာ ဝန်ရှိနေပြီ။ ဖုတ်သက်ကို ထွက်အောင်ထုတ်ကြပါစို့ခင်ဗျား။ ။
No Comments on သမိုင်းဆိုတာဖြောက်ဖျက်လို့မရဘူး
Continue reading “သမိုင်းဆိုတာဖြောက်ဖျက်လို့မရဘူး”
No Comments on ကျားဆိုးထွက်လာပြီ။
” ‌ကျားဆိုးထွက်လာပြီ ”
မြေခွေးတွေ ခွေးအတွေ စုံအညီနဲ့။
___ မြင်လှည့် ။
မမေ့မလျှော့ ၊ မပေါ့မဆ
အပ္ပမာဒေန ၊ သမ္ပာဒေထ ကြကွဲ့ ။
Credit : Htin Linoo WisdomVilla Htin Lin Oo
တပ်ချူပ်တောင်ပြန်ကြောက်နေရတဲ့သဘောရှိတယ်၊ ဘယ်နစ်လောင်းပြိုင်လူသတ်မူကို ကိုင်ထားလဲမသိဘူး
No Comments on တပ်ချူပ်တောင်ပြန်ကြောက်နေရတဲ့သဘောရှိတယ်၊ ဘယ်နစ်လောင်းပြိုင်လူသတ်မူကို ကိုင်ထားလဲမသိဘူး
စီအိုင်ဒီရော ရဲတွေရော တရားရုံးကပါ
No Comments on ဗစ်တိုးရီးယားအမူတာဝန်ပျက်ကွပ်သောသူများအားဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းမှ့အရေးယူရန်နိင်ငံတော်သမ္မမှညွှန်ကြားထားပြီဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံးသတင်းထုပ်ပြန်။
Google poly arts.
No Comments on Google poly arts.
Crisis in the coronavirus outbreak, China is thereacover up deadly bird flu among chickens close to conorvirus epicentre of Wuhan.
No Comments on Crisis in the coronavirus outbreak, China is thereacover up deadly bird flu among chickens close to conorvirus epicentre of Wuhan.
-Crisis in the coronavirus outbreak, China
-Is thereacover up
-Deadly bird flu among chickens close to coronavirus epicentre of Wuhan
Latest on the coronavirus outbreak as of 2020-02-03 13:28 National Statistics (Beijing Time)
Confirmed cases: 17,239 in China, over 248 abroad
Deaths:361 in China, abroad
Discharged from hospitals in the Chinese mainland:over 477
#WuhanVirous #coronavirus #wuhan
Posts Select Month February 2021 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 March 2019 December 2018 October 2018 September 2018 August 2018 June 2018 May 2018 April 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017
အလွဲများနဲ့မြန်မာပြည် Select Category ကျော်ကြားထင်ရှားမြန်မာပြည်သားများ (5) မြန်မာကာတွန်းများ (5) မြန်မာသမိုင်း📌📌📌 (15) အထွေထွေ (4) အလွဲများနဲ့မြန်မာပြည်📌📌📌 (18) အာဏာရှင်မြန်မာတပ်မတော် (20) Myanmar Politic (31) rangoon88burma (257)
မြန်မာ့နိင်ငံရေး Select Category ကျော်ကြားထင်ရှားမြန်မာပြည်သားများ (5) မြန်မာကာတွန်းများ (5) မြန်မာသမိုင်း📌📌📌 (15) အထွေထွေ (4) အလွဲများနဲ့မြန်မာပြည်📌📌📌 (18) အာဏာရှင်မြန်မာတပ်မတော် (20) Myanmar Politic (31) rangoon88burma (257)
Join 33,003 other followers
အာဏာရှင်မြန်မာ့တပ်မတော် Select Category ကျော်ကြားထင်ရှားမြန်မာပြည်သားများ (5) မြန်မာကာတွန်းများ (5) မြန်မာသမိုင်း📌📌📌 (15) အထွေထွေ (4) အလွဲများနဲ့မြန်မာပြည်📌📌📌 (18) အာဏာရှင်မြန်မာတပ်မတော် (20) Myanmar Politic (31) rangoon88burma (257)
မြန်မာ့ကာတွန်းများ Select Category ကျော်ကြားထင်ရှားမြန်မာပြည်သားများ (5) မြန်မာကာတွန်းများ (5) မြန်မာသမိုင်း📌📌📌 (15) အထွေထွေ (4) အလွဲများနဲ့မြန်မာပြည်📌📌📌 (18) အာဏာရှင်မြန်မာတပ်မတော် (20) Myanmar Politic (31) rangoon88burma (257)
© 2021	davidtun88 🇲🇲